ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်ရှက်တယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်ရှက်တယ်…
Posted by GarmeThane on Aug 10, 2010 in News | 33 comments
အခုကျွန်တော်အလုပ်လုပ် နေတာက အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပါ………….. ဒီခေတ်မှာက အင်တာနက်ဆိုတာက တော်တော်အသုံးဝင်နေတာ လေ ဒါကြောင့်………… ကျွန်တော်လည်း လူငယ်ပီပီ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိ တာနဲ့ ဒီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်……… ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က connection ကောင်းတော့ လူက တော့ ever စည်နေတာပေါ့…….. လာတဲ့ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေက ဒီခေတ်စတိုင်တွေနဲ့ ပေါ့……….လူတွေကြည့်လိုက်ရင် အထင်ကြီးစရာတွေပါပဲ……… ကျွန်တော်က ဆိုင်မှာလုပ်တာဆိုတော့ coustomer တွေ ကမေးသမျှ လိုက်လံပြီး ရှင်းပြပေးရတာပေါ့…….. ဒါပေမဲ့မေးလိုက်ရင် …… မောင်လေး…..စာတွေ ဘာတွေဘယ်မှာ ရှာလို့ ရလဲ…ဘာလဲ….ညာလဲ….သူ တုိ့ သင်ကြားရတဲ့ စာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေးတာတစ်ခုမှမရှိဘူး……. မောင်လေး….. Gtalk မှာ ပုံဘယ်လိုတင်ရတာလဲ……. ဒီ EMO ကောင်လေးတွေပုံကိုဘယ်မှာရှာလို့ရလဲ ….. ဟိုကိုရီးကားကို ဘယ်မှာ download လုပ်လို့ရလဲ……… အဲ့ကားထဲကမင်းသားလေးရဲ့  ဆိုဒ်ကို ဘယ်မှာရှာလို့ရလဲ……..စသဖြင့် ပေါက်ရ (အရည်မရ အဖတ်မရ ) တွေပဲ မေးတတ်ကြပါတယ်…………. တစ်ချို့ ကတော့ စာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေးတဲ့သူရှိပါတယ်……. (1/100) တစ်ရာမှာတစ်ယောက်ပေါ့………… ပြီးတော့ …မိန်းကလေး တွေ ရော….ယောက်ျားလေး တွေရော……. Gtalk အကောင့်ကို ၃ ခု ၄ ခုဖွင့်ြ့ပီး……… အားရပါးရကို သောက်တင်း ထိုင်တုတ်နေတာ ……….. တကယ့်ကို ဟက်ဟက်ပက်ပက် ကို ချက်နေတာဗျာ……… (အင်တာနက်ကို တီထွင်ခဲ့သူက မသိတာတွေကို ရှာဖို့…….လူတွေကိုအသုံးပြုရာမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့……… တစ်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ ……… စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တီထွင်ခဲ့ တာပါ….) ကျွန်တော်တစ်ခါ တစ်ခါ ဆုတောင်းမိပါတယ်…… အင်တာနက်ကိုတီထွင်ခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံကို မလာပါစေနဲ့……လို့……….. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူထွင်ထားတဲ့ ဒီ ဟာ ကြီး ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရည်းစားရှာဖို့ အသုံးပြုနေတာဆို……. သူ့ကိုယ်သူသတ်သေသွား နိုင်တယ်….. 5.8.2010 ရက်နေ့ ကမှတ်မိပါသေးတယ်……. ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကို စကားပြန်တစ်ယောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့နိုင်ငံခြားသူ လေးယောက် လာပါတယ်………….. သြဇီ ကို pfingo ဖုန်းခေါ်လို့ ရလားဆိုပြီးတော့ပေါ့……………….. ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်………….. နိုင်ငံခြားသူနှစ်ယောက်က အင်္ကျီရင်ဖုံး နဲ့ ထဘီနဲ့ ကို သေသေချာချာ ၀တ်ထားတာ ဗျာ…… တကယ်ကြည့်ပျော်ရှုပျော် နိုင်တယ်……….. မျက်စိကို အေးနေတာပဲ………. နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်ကျတော့ T- shirt ကို ပုဆိုးနဲ့ ၀တ်ထားတယ်….. ခါးပတ်တောင်မပတ်ပါဘူး…………….. ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကဖုန်းပြောတယ်………..နှစ်ယောက်ကအင်တာနက်သုံးတယ်…….. ကျွန်တော်နောက်ကနေ တစ်ချက်ရှိးလိုက်တယ်………. အင်တာနက်သုံးတဲ့နှစ်ယောက်ကိုပေါ့……. Memory stick တစ်ချောင်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်………သူတို့ စာတွေကို download လုပ် ကူးယူပြီးတော့ စတစ် ထဲ ထည့်နေတယ်……… စာတွေက အများကြီးပဲဗျာ…….. ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာကိုတော့နားမလည်ပေမဲ့ သူတို့ အတွက်အကျိုးပြုမည့် စာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်………. ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင် သူတို့စာတမ်းပြုစု နေတာနဲ့တူပါတယ်…………. ကဲကြည့်ဗျာ…………….. တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဘာကိုဘယ်လို အမြတ်ရအောင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတုိ့မှာရှိနေတယ်ဗျ……… အခုပဲကြည့်လေ……… ပြီးတော့…….. ကျွန်တော်တို့ ကိုမေးတယ် “How much ´´ တဲ့ ကျွန်တော်တုိ့ စုစုပေါင်း 4500 ကျပ် ကျပါတယ်လို့ပြောတော့ သူတုိ့စကားပြန်က ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်…… ဈေးတစ်စုံတစ်ရာ ဆစ်ခြင်းပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ရက်ရက်ရောရောကို ပေးသွားတယ်………ဗျာ ကျွန်တော်တကယ်လေးစားသွားပါတယ်…….. သူတို့မှာ………. သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့အသုံးပြုမှု ဟာ……..ဒီအခကြေးငွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်ထင် မှတ်ထားတဲ့ ……..ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိကြပါတယ်………… တစ်ချိုးမြန်မာတွေဆိုရင်………. ဈေးကိုမတန်တဆ ဆစ်တာ ဗျ……….. 5000 ကျရင်………3500 နဲ့ ရအောင်ဆစ်တာ……… အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ ကျွန်တော် တကယ်စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ…………. ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်လတစ်လ Phone bill ဆောင်ရတာ နဲ တာမှမဟုတ်တာ ဗျ………. ဒါကိုသူတို့နားမလည်ဘူးလေ……… ဟိုနိုင်ငံခြားသားနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ကျွန်တော် ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်တော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ………… အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားနေရာမှာ မြန်မာသာဆိုရင် မြန်မာအချင်းချင်း နှိုင်းပြီးမပြောပါဘူး…………….. အခုဟာ……….. က နိုင်ငံခြားသား…………. တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာ …………..ရှက်တယ်ဗျာ…………………………………….
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၀မှတ်အပြည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်လည်း ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်ချက်ပါတဲ့ စာတွေရေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
kai ရေ ကိုရေးရင်မထောက်ခံပါနဲ့နော် ——-
အမှတ် မပေးပါနဲ့တော့ (အမှန်ကြောက်လို့ပါ)
ကိုယ် ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှမရွေ့ ပါဘူး ရှက်မိပေမဲလဲ ကိုဘဲစပြီးကောင်းအောင် ကြိုးစားရတာပေါ့ဗျာ ကြိုးစားပေးပါ။
This isareally good post. It is really embarrassing for those people who normally use internet for nothing.I havealot of friends invitation in my gtalk list. They normally asked me “Nay Kg Lar”?.Well, we can use Burglish but it would be better we can use simple English .If you really do not know english,try english via internet.In this way, we can improve our English.We should take full advantages of technology.They normally asked me “you bal mhar nay lae?yee sar shi lar.A pyin mhar tway lo ya lar” all those stupid things.Previously I accepted them because I wanted to share my knowledge with their knowledge and wanted to make friends.Then I asked them “What is your job?”.Most of them are surprisingly “JOBLESS” and “Schooling”.
They have nothing to do and go to cyber and watch porn and waste their time by those nonsense things.This is brain drainage within country..
မင်းက ဗမာဖြစ်ရတာ…ရှက်စရာလို့ထင်တာလား….ဗမာပြည်မှာလည်း…အင်တာနက်ကို..အကျိုးရှိရှိသုံးနေတဲ့သူတွေအများကြီးကွ။ မင်းရဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်လေးထဲက အမြင်ကျင်းကျင်းလေးနဲ့ ကြည့်ပြီး ဗမာလူမျိုးဖြစ်ရတာကို ရှက်တယ်လို့မပြောနဲ့။ မင်းအထင်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံက အင်တာနက်ဆိုင်တွေသွားကြည့်….မင်းထင်တာတွေမှားသွားလိမ့်မယ်။ အကောင်းအဆိုးဆိုတာနေရာတကာမှာ ရှိမှာပဲ..။ ဗမာလူမျိုးတွေ အင်တာနက်နဲ့ထိတွေ့လာတာကိုပဲ ကျေနပ်စမ်းပါ….နောက်ကျမှ..တဖြည်းဖြည်းချင်း အသုံးချတတ်လာလိမ့်မယ်။ ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်း…..မနှိမ်ပါနဲ့ကွာ………
ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ ဟိုဟာလည်း ဟုတ်တာပဲ။ အားလုံးမှန်ဒယ်။
အဲဒီလို ဖော်လိုလိုက်တာက မဟုတ်တာပဲ။ မပြတ်သားလိုက်တာဗျာ။
မြန်မာဖြစ်ရတာ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့စကားက ငါ့ကို…အတော်လေး ထိတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော..ငါက မြန်မာဖြစ်ရတာ အရမ်းဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ထင်လို့။အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ ထင်ထားလို့ပဲ။
ခင်ဗျား…သိပ်ပြီး အရှက်သည်းနေရင် ထမီဝတ်ထားလိုက်….။
လောကကြီးမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲနေတယ်။
မြန်မာမှ မဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာလည်း Internet ကို Abuse လုပ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
သူတို့ဘက်က ကာပြောနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် အသုံးအနှုန်းက အရမ်းကို ဒေါသသင့်နေတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်နေတယ်။
စေတနာကို လေးစားပါတယ်။ဒါပေမယ့် Fault Finding ပဲရှာနေတာ ပြသနာကို ဖြေရှင်းရာ မရောက်ဘူး။
endless ပြောတာမှန်တယ် ငါနေတဲ့တရုတ်ပြည်ကအင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာဆိုတရုတ်လူငယ်တွေ အများအားဖြင့် ဂိမ်း ကစားနေတယ် QQ နဲ့ချင်းချင်းဆက်သွယ်အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ကြတယ် ကောင်းတာဆိုးတာရှိမှာပေါ့ သူတို့နိုင်ငံမှာကအင်တာနက်ကနေလုပ်စရာတွေအများကြီး တို့ဆီမှာကဘာရှိလိုတုံး
အစ်ကို GarmeThane ရေကျွန်တော်လည်းအစ်ကို.လို အင်တာနက်ဆိုင်မှာအစစအရာရာအဆင်ပြေလို.ဆိုပြီးဝင်လုပ်နေတာပါဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းအဲဒီကစ္စကိုပြောချင်နေတာကြာပြီဗျပို.စ်မတင်တတ်လို.အခုလိုသူများတင်မှပဲ Comment ပေးနေရတာ။ ကျွန်တော်တို.ဆိုင်မှာဆိုလည်းအဲလိုပါပဲ။ လူငယ်လေးတွေဗျာလာလိုက်ရင်ချက်တင်သူတို.သုံးတဲ.ဂျီတော.တောင်အကောင်.ကျတော. မဖွင်.တတ်ကြဘူးဗဟုသုတလာရှာတဲ.လူဆိုတစ်ရာမှာတစ်ယောက်ဗျ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အခုမှဆယ်တန်းပဲရှိသေးတယ် ဟိုဘက်ကကောင်လေးတွေပုံတွေကိုခဏခဏ Print ထုတ်ထုတ်နေတာဗျ ကျွန်တော်ကလည်းတောသားဆိုတော. ဗြောင်ပဲပြောလိုက်တာညီမလေးအဲဒီပုံတွေထုတ်ပြီး ဘာလုပ်တာလည်း ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိပဲနဲ.ဆိုတော. အစ်ကိုနဲ.ဘာဆိုင်လို.လဲတဲ.ပိုက်ဆံပေးပြီးထုတ်တာတဲ. တော်တော်ရိုင်းတယ်ဗျ။ သူကလည်းသူ.ရဲ.အလှဆုံးပုံတွေကိုကောင်လေးတွေဆီပြန်ပို.တယ်ဗျ ခဏခဏပဲအဲဒါကျတော.ဘယ်ကပို.ရမှန်းတောင်မသိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ကသုဝဏ္ဏကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆိုတော. အလုပ်ကိစ္စလာသုံးတဲ.လူကိုသိပ်မတွေ.ဘူးဗျ အဲလိုချက်တာလောက်ပဲတွေ.တွေ.နေရတယ်။ ကောင်လေးတွေဆိုလည်းဒီလိုပါပဲဗျာချက်တာကကိုယ်နဲ. အသိမိတ်ဆွေအဝေးရောက်နေလို.ဆိုထားပါဗျာ။ အခုကျတော.တစ်ဖက်ကဘုန်းကြီးလားသီလရှင်လား အခြောက်လားတောင်မသိပဲချက်ချက်နေတာတကယ်ကိုအံ.သြတယ်ဗျာ။ အနီးဆုံးဆိုကျွန်တော်.ကောင်မလေးရှိသေးတယ်တကယ်ကိုချက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်.ဆိုင်ကိုလာတယ်ချက်တာပဲတတ်တယ် ၀က်ဆိုက်ဘယ်ကဖတ်ရတယ်ဆိုတာလုံးလုံးမသိဘူးအခုမှပြောပြလို.နည်းနည်းပါးပါးတတ်တာ။ သူများပြောသမျှလည်းယုံတယ်ဗျာ ဟိုဘက်ကလိမ်တာသိသာနေတာတောင်ယုံတယ်ဗျာ အခုတော.တော်တော်ပြောလို.သိပ်မချက်တော.ပါဘူး သူတို.သူငယ်ချင်းတွေဆုံရင်တော.ဟိုင်ကောင်လေးကဘယ်လိုဒီကောင်လေးက ဘယ်လိုစမြုပ်ပြန်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်ချိန်းကျတယ်ဗျ တကယ်လည်းသွားကျတယ် အဲဒီချက်တာနဲ.ပတ်သတ်ပြီးလည်းသူနဲ.ကျွန်တော်ခဏခဏပြဿနာတတ်တယ် ကျွန်တော်ကတော.မြန်မာဖြစ်ရတာအချို.အရာတွေဂုဏ်ယူပါတယ် ဒါပေမဲ.အခုလိုနည်းပညာကိုအလွဲသုံးနေတာကျတော.လည်းရှက်မိတယ် အထက်ကလူတွေပြောသလိုအကုန်းလုံးတော.မဟုတ်ကျပါဘူး ဒါပေမဲ.တွေ.နေရသမျှတော. လူတစ်ရာမှာ 1 ယောက်လောက်သာအကျိုးရှိရှိသုံးနေကျတာပါဗျာ ။နောက်နောင်သုံးတတ်ရင်တော.အကျိုး၇ှိရှိသုံကျမှာပါပြောရမယ်ဆိုလူငယ်တွေ အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျသင်တန်းတွေကလည်းသင်ပြီဆိုတာနဲ. ချက်တာနဲ.ပတ်သတ်တာပဲသင်ပေးကြတာလေ အဲဒါလည်းပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော.မြန်မာဖြစ်ရတာအချို.အရာတွေကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ အ၀တ်စားနဲ.ပတ်သတ်လို.ကျွန်တော်လည်းတွေ.ဖူးတယ်ဗျ။ ဆူးလေဘက်မှာနိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ဗျာမြန်မာလိုဝတ်ထားတာ တော်တော်ကြည်.လို.ယဉ်တယ်ဗျသူ. ကလေးတွေကိုလည်းအဲလိုပဲဝတ်ပေးထားတာ တကယ်မြန်မာမိသားစုလေးကျနေတာပါကျွန်တော်တောင်ချီးကျူးမိတယ်။ ကျွန်တော်.စာလေးကိုဖတ်မိတယ်ဆိုလည်းသိတဲ.လူတိုင်းပေါ. ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာပို.စ်ဘယ်လိုတင်ရတာလဲဆိုတာသိတဲ.လူရှိရင်ပြောပြကြပါဗျာ တကယ်လို.ပြောပြမယ်ဆိုလည်း မေးထဲပို.ပေးကြပါနော် narziparty2009@gmail.com ပါ။
I don’t like your Post Title. If want to post that article, you should choose other head title. Because I’m Myanmar and I’m very proud for my nationality.
We are MYANMARS and we love the motherland !
Hay naziparty2009@ , you shouldn’t ask this young girl with her photos because this is not your business . I think she is no rude. No one can access internet since they were born. Asainternet-cafe stuff , your duty is just to help the customers how to use it ,not to ask their personnel cases. In Europe , there are so many people who are using internet as the sexual entertainment and making sexual relationships. I’ve never seen like that in our country. We are better than them. Whatever , I’m proud of beingaMyanmar .
Hay naziparty2009@ , you shouldn’t ask this young girl with her photos because this is not your business . I think she is no rude. No one can access internet since they were born. Asainternet-cafe staff , your duty is just to help the customers how to use it ,not to ask their personnel cases. In Europe , there are so many people who are using internet as the sexual entertainment and making sexual relationships. I’ve never seen like that in our country. We are better than them. Whatever , I’m proud of beingaMyanmar .
ဒါတစ်ခုနဲ့ တော့ မြန်မာဖြစ်ရတာရှက်တယ်ဆြို့ပီး အားလုံးသိမ်းကျူံးပြီးပြောလို့ တော့မရပါဘူး ။နေရာတိုင်းမှာ အဆိုးအကောင်းဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတတ်တာမျိူးပါ။
နည်းပညာ ကို အသားပေးစေချင်တဲ့ နာဇီပါတီ အနေနဲ့ ဒီဆိုက်မှာတောင်ပို့ စ်ဘယ်လိုတင်ရမှန်းမသိတာက တော့ ဆိုးတာပဲ။ အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သုံးတာကြာလာတော့လည်း အဆိုးနဲ့ အကောင်း အကျိူးရှိတာနဲ့ အကျိူးမရှိတာ ခွဲခြားသွားတတ်မယ်ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သလို ပေါ့ ။ ငယ်တဲ့အရွယ်မှာ စာအစုံဖတ်တာပဲလေ။ ကောင်းတာလည်းပါမယ် မကောင်းတာလည်းပါမယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သက်ရင့်လာတော့လည်း စာကောင်းပေမွန်ဆိုတာရွေးချယ်တတ်လာကြတာပါပဲ ။
ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးမချဘဲ မကောင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးချနေကြတာ
မြန်မာဖြစ်ရတာရှက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကြောင့်ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ…စေတနာကြောင့်ဒေါသသင့်သွားတဲ့စကားလုံးလေးပါ…ညီလေးရဲ့စေတနာကိုဒီpost ထဲမှာမြင်နေရပါတယ်…ဒါပေမယ့်ညီလေးရေ မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်မရှက်လိုက်ပါနဲ့….တခြားကြောင်းရင်းတွေရှိနေသေးလို့ ညီလေးမြင်ရသလိုမျိုး ဖြစ်နေကြတာပါ..ဥပမာကွာ အင်မတန်လေးလံထိုင်းမှိုင်းတဲ့internet connection မျိုး ၊ ပိတ်ဆို့ကာဆီးထားတဲ့ အတားအဆီးအမျိုးမျိုး၊နည်းပညာနဲ့အခွင့်အရေးခေါင်းပါးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမျိုးတွေမှာ လူငယ်တွေရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေလိုစိတ်တွေပျောက်ဆုံးကုန်ကြတာပါ..တကယ်ရှက်သင့်တာက အနာဂတ်ပေါင်းများစွာကိုအမှောင်ချထားတဲ့သူတွေပါ…အဲဒီတော့ကိုယ်သိထားတတ်ထားတာတွေကိုအများအကျိုးရှိမယ်ဆို share လုပ်ပေးပါ ကိုယ်မျက်စိရှေ့မှာ လမ်းကြောင်းမှားနေတာတွေ့ရင် နားဝင်အောင်ဖျောင်းဖြပါ…စေတနာမှန်ရင်အကျိုးပေးမှန်ပါလိမ့်မယ်…….
အင်တာနက်ဆိုင်က ၀န်ထမ်းဆိုပေမယ့် လူငယ်တွေကို ကိုယ်သိသလောက်လေးမျှဝေပေးစေချင်တယ်..သူတို့ chat နေရင်လည်း၊ ချက်တင်ထက်ကောင်းတဲ့ entertainment လေးတွေ၊ knowledge လေးတွေရှိနေတာကို လမ်းညွှန်ပြစေချင်တယ်..စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့လူငယ်တွေဘဲ ဆရာလုပ်သလိုပုံနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ အကြံပေးတဲ့ပုံဆို လက်ခံကြမှာပါ.. ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာဖြစ်ရတာကို အမြဲဂုဏ်ယူတယ်.. မြန်မာဖြစ်ရတာရှက်စရာလို့၊တစ်ခါမှ မတွေးဘူး..
တို့ ဗမာတွေ တလွဲဆံပင်ကောင်းတယ်
ဒါပေမယ့် ဗမာ ဆိုတာ ဆစ်ရမှ ကျေနပ်တဲ့လူမျိုး
အခေါင်းဝယ်ရင်တောင် အလကားရမယ် ဆိုရင် ၂ လုံးပေးဆိုတာလိုပေါ့
တကယ်က အင်တာနက်ကို တလွဲသုံးနေကြတာ .. အချိန်ကို အကျိုးရှိတာ မသုံးကြတာ
ဗမာဖြစ်ရတာတော့ မရှက်ပါဘူး .. လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှူတာခြင်း ကွဲကြပါသေးတယ်
မင်းလို အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီး အင်တာနက် တစ်ခုအကြောင်းပြု x….ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်ရှက်တယ် ဆိုတာ နည်းနည်းတော့များသွားတယ်..ငါ့ညီရာ။
ကိုယ့်ဆိုင်ကို လာသုံးတဲ့ဖေါက်သည်တွေရဲ့ PC ခိုးကြည့်ပြီးအတင်းတုပ်တာရော မင်းမရှက်ဘူးလား ။
၇ှက်၇မှာက … မင်း။
ကိုယ့်ဖက်ကကြည့်တော့ လက်ဖ၀ါး …
သူ့ဖက်က ကြည့်တော့ လက်ဖမိုး ….
” ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်ရှက်တယ်… ”
အဲဒီစကားကိုတော့ သဘောမကျပါ ကိုယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်ရတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရှက်နေရင် ….
သူများနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ ……….
မြန်မာဖြစ်ရတာကိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်…ဒါပေမယ့်အင်တာနက်မှာ ရီးစားချည်းပဲ မရှာကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. အင်တာနက်က နိုင်ငံတကာနည်းပညာတွေ ရှာဖွေလို့ရအောင် လုပ်တဲ့ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုပါ.. အင်တာနက်ကျယ်ပြန့်လာတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်.. အခုအင်တာနက်ကြီးတိုးတက်လာတာတောင် လူတွေကိုမျက်စိပိတ် ၊ နားပိတ်လုပ်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်.. အင်တာနက် အဲဗား တိုးတက်လာရင်ပိုကောင်းပါတယ် အဲဒါမှ ပြည်သူတွေလည်း မျက်စိဖွင့်၊ နားဖွင့် ဖြစ်မှာ
ဂုဏ်ယူစရာ ရှိလည်း ချစ်နေရမှာပဲ…။
ဘာလို့လဲဆို ကိုယ်က ဒီရေမြေ မှာမွေး ဒီနိုင်ငံမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တာကိုးးးးးးးးးးး
ဒီပို့ကတော်တော်ဟောင်းနေပေမဲ့.. မြန်မာတွေ..ဘော်လုံးပွဲစည်းကမ်းဖေါက်တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြန်တက်လာတာမို့ .. ကျုပ်ကလည်း ထိပ်ဆုံးကမန်းထားတာမို့ .. ထပ်မန်းတာပါ..။
ကိုရင်နေ ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်.။
ရှက်လိုက်..။ဂုဏ်ယူလိုက်..။ အားမလိုအားမရဖြစ်လိုက်.. မချိတင်ကဲဖြစ်လိုက်..ဖြစ်ကြနိုင်ပေမဲ့.. စာရင်းချုပ်တော့… ဒီဟာကြီးကိုပဲ.. ချစ်နေရမှာပါပဲ..။
ချစ်သူတို့..။ အိမ်ထောင်လက်တွဲဖေါ်တို့လို..” တော်ပြီကွာ..ဘွာတေး..နောက်တယောက်နဲ့ပြန်စ.”.လို့မှ.. လုပ်လို့မရတာနော…။
ရှက်ရင်….ဖင်နဲ့ ငုတ်နဲ့ စောင့်ပြီးသာ သေလိုက်ကွာ…..
အဲဒါ နားအေးရော.. ရှက်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး.. ချက်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး….
လူဖြစ်မှတော့… အီအီး..ပါရင်..ဖင်လှန်ရတာ..ရှက်စရာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး…
မကောင်းမှု လုပ်ရမှာကို ရှက်ရမယ်…မကောင်းမှု လုပ်ရမှာကို ကြောက်ရမယ်…
မှန်ခဲ့ဖူးမယ်… မှားခဲ့ဖူးမယ်… လူဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်… ခွေးဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်……လောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်..
ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲ…. မောင်ရင်..
လောလောဆယ်တော့…. မြန်မာဖြစ်ရတာ ရှက်တတ်ရင်တော့..
အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး မလား…
ဖင်နဲ့ ငုတ်နဲ့ စောင့်ပြီးသာ သေလိုက်တော့..
ပညာပေး အနေနဲ့ တင်ထားတဲ့ Post က ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာတကယ်ရှက်တယ် ဆိုတာတော့ မသုံးသင့်ဘူး ပေါ့ဗျာ၊ အကြံပြုတာပါ။
ဒါလောက်လေးနဲ့ မြန်မာဖြစ်ရတာ ရှက်စရာလို့ပြောတာကတော့ သဘာဝမကျပါဘူး။
အင်တာနက်မှာချက်တင်ဘဲထိုင်တာ လက်တွေ့အသုံးမ၀င်တာဘဲလုပ်နေတာကတော့ အမှန်တရားထဲမှာပါပေမယ့်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲက လူတွေဘဲ ဒီအလုပ်မျုိးလုပ်နေတယ်မထင်ပါနဲ့။
တစ်ခြားနိုင်ငံက လူတွေလဲ အဲလိုလုပ်နေကြတာ တစ်ပုံကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေသူလဲ တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။
(အခုပဲကြည့်လေ……… ပြီးတော့…….. ကျွန်တော်တို့ ကိုမေးတယ် “How much ´´ တဲ့ ကျွန်တော်တုိ့ စုစုပေါင်း 4500 ကျပ် ကျပါတယ်လို့ပြောတော့ သူတုိ့စကားပြန်က ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်…… ဈေးတစ်စုံတစ်ရာ ဆစ်ခြင်းပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ရက်ရက်ရောရောကို ပေးသွားတယ်………ဗျာ ကျွန်တော်တကယ်လေးစားသွားပါတယ်…….. သူတို့မှာ………. သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့အသုံးပြုမှု ဟာ……..ဒီအခကြေးငွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်ထင် မှတ်ထားတဲ့ ……..ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိကြပါတယ်………… တစ်ချိုးမြန်မာတွေဆိုရင်………. ဈေးကိုမတန်တဆ ဆစ်တာ ဗျ……….. 5000 ကျရင်………3500 နဲ့ ရအောင်ဆစ်တာ……… အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ ကျွန်တော် တကယ်စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ…………. ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်လတစ်လ Phone bill ဆောင်ရတာ နဲ တာမှမဟုတ်တာ ဗျ………. ဒါကိုသူတို့နားမလည်ဘူးလေ……… ဟိုနိုင်ငံခြားသားနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ကျွန်တော် ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်တော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ………… )
ဈေးဆစ်တာ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာဗျာ။
ဈေးမဆစ်ဘဲတောင်းသလောက်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူများကို အထင်ကြိးပြိး ကိုယ့်လူမျုိးကို စိတ်ပျက်ရတယ်လို့။
ဒီဆောင်းပါးက ရေးတာ တစ်ဖက်သတ်ဆန်လွန်းတယ် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် ဇွတ်အပြစ်မြင်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ရှာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကို တစ်ချက်လောက်တော့ ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလားဗျာ။
ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ် kai ကလည်း မြန်မာလူမျိုးကို အကောင်းမပြောရင် သိပ်သဘောကျနေသလိုဘဲနော်။
(ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၀မှတ်အပြည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်လည်း ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်ချက်ပါတဲ့ စာတွေရေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။)
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေသလို ပဲ ဗျ
မြန်မာ ဖြစ်ရတာ လုံးဝ ရှက်စရာ မလိုပါကြောင်း